ကိုရီးယားရဲ့ အပြုံး အလှဆုံး နာမည်ကျော်မင်းသမီးဆယ်ယောက်
23 Apr 2018 . 3:42 PM
မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်း အားကျရတဲ့ အသားဖြူဖြူ၊ နုနုဖတ်ဖတ်အရုပ်မလေးပုံစံနဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်ချောမောသူတွေကြား ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲက Idol တွေပါပဲ။ ဒီလောက်ချောမောလှပနေတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေရဲ့ အလှဟာ သဘာဝအလှမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြုပြင်ထားတဲ့အလှမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ လှရက်လွန်းတာတော့ ငြင်းမရပါဘူး။ ဒီလောက်အလှဆုံးတွေစုနေတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးတို့ကြား ပြုံးလိုက်တာနဲ့ ကြွေကျသွားလောက်မယ့် ပြုံးအလှပိုင်ရှင် (၁၀) ယောက်လည်း ရှိပါသေးသတဲ့။ သူတို့ကတော့-
(၁) Kim Tae Hee
ဘယ်မင်းသမီးတွေ ဘယ်လောက်လှလှ ကင်ထေဟီးရဲ့ အပြုံးတစ်ချက်မှာ ကြွေဆင်းသွားကြတဲ့ယောက်ျားထုကြီးကတော့ မနည်းမနောပါပဲ။ မျက်လုံးကပါ ကြည်စင်ရွှန်းလဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အပြုံးတစ်ချက်ကတော့ ပါးချိုင့်ကွေးကွေးလေးနဲ့ အလှဆုံးလို့ဆိုရမလောက်ပါပဲ။ ဒီအပြုံးလေးကြောင့်ပဲ ပျိုမေတို့အသည်းစွဲ မင်းသားချော Rain တောင် ရုန်းမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာမလား?
(၂) Song Hye Kyo
အွန်စောလို့ လူသိများတဲ့ Song Hye Kyo ရဲ့ အပြုံးကတော့ လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ စွဲငြိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အသက်ကြီးလာလေလေ ပိုနုပျိုလာရခြင်းအကြောင်းတွေထဲမှာ သူမရဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေလည်း ပါနေမလားဆိုတာ သိချင်စရာပါပဲ။
(၃) Han Hyo Joo
ဒီမင်းသမီးလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က “W Two World” Series နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အပြုံးချိုချိုအေးအေးလေးတွေက ကိုရီးယားရဲ့ အပြုံးအလှဆုံးမင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမျက်နှာလေးနဲ့ ဘာမှထူးထူးခြားခြားလိမ်းခြယ်ထားခြင်းမရှိတာတောင် သူမရဲ့အပြုံးတစ်ချက်နဲ့တင် သူမကို မချစ်ဘဲ မနေနိုင်အောင် စွဲလမ်းစေမိတဲ့အထိ ချစ်စရာကောင်းသူပါ။
(၄) Park Min Young
City Hunter ဇာတ်ကားနဲ့ တစ်ရှိန်ထိုးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဒီမင်းသမီးချောလေးကလည်း ပြုံးလိုက်တာနဲ့ မျက်လုံးလေးတွေပိတ်သွားတဲ့အထိ ချစ်စရာကောင်းသူမို့ ကိုရီးယားက အမျိုးသားတွေ ဝန်းရံခံထားရသူလေးပါ။
(၅) Bae Suzy
နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး ချစ်စဖွယ်အမူအရာလေးနဲ့ ကိုကိုတွေအသည်းစွဲအောင် ပြုစားနိုင်တဲ့ Suzy ရဲ့ အပြုံးအောက်မှာ ကြွေကျသွားတဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
(၆) Jun Ji Hyun
ကိုရီးယားရဲ့ တကယ့် နာမည်ကြီး ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ကြော်ငြာမော်ဒယ်လ်လည်းဖြစ်၊ မင်းသမီးလည်းဖြစ်တဲ့ Jun Ji Hyun ကတော့ အိမ်ထောင်သားမွေးပြုပြီးလို့ ကလေးတွေရတဲ့အထိ အပြစ်ကင်းစင်ဖွယ်အပြုံးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေအသည်းကို စုပြုံပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ သူမ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “My Love from the Star” ရုပ်သံစီးရီး ထဲမှာတော့ တကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေ အသွင်ပြင်လေးတွေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။ အမျိုးသားတို့သာမက အမျိုးသမီးထုပါချစ်ခင်ခြင်း ခံထားရတဲ့အထိပါပဲ။
(၇) Shin Min Ah
ပါးချိုင့်ပါတဲ့လူတွေရဲ့ အပြုံးကမှ နှလုံးသားကို ညို့ယူဖမ်းစားစေတယ်ဆိုတာ Shin Min Ah ကို ရည်ညွှန်းနေသလိုပါပဲ။ ပြုံးလိုက်တိုင်း ချိုင့်ဝင်သွားတဲ့ ပါးချိုင့်ခွက်ခွက်လေး ၂ဖက်ထဲမှာ ယောက်ျားထုကြီးတစ်ရပ်လုံး ခိုဝင်ချင်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ။
(၈) Park Shin Hye
တည်ငြိမ်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ထဲမှာ သူမရဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ Park Shin Hye ဟာလည်း သူမရဲ့ အပြုံးကိုမြင်မိတဲ့လူတိုင်း လိုက်ပြုံးချင်လာမိတဲ့အထိအောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသူပါပဲ။
မအူမလည် ခပ်တည်တည်လေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ IU ကတော့ ပြုံးလိုက်တိုင်း ရင်ထဲ အေးသွားတဲ့ထိအောင် လှတဲ့ပြုံးအလှပိုင်ရှင်ပါ။ သူမရဲ့ နုနုနယ်နယ် ချစ်စရာသွင်ပြင်လေးနဲ့ အပြုံးဟာလည်း ကိုရီးယားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိနေပါတယ်။
(၁၀) Park Bo Young
ပြုံးအလှပိုင်ရှင်တွေထဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ပါဝင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာ “Strong Woman Do Bong Soon” ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ မင်းသမီးလေး Park Bo Young လည်း အပါအဝင်ပါ။ ရယ်လိုက်တာနဲ့ ကလေးလေးလို အပြစ်ကင်းတဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်လေးပါပဲ။
တကယ့်ကို အချောအလှဆုံးတွေမို့ ဒီမင်းသမီးလေးတွေထဲက ဘယ်မင်းသမီးလေးကို ကိုယ်ကြွေမိလဲဆိုတာ ဖြေသွားပေးဦးနော်။
ကိုရီးယားရဲ့ အပွုံး အလှဆုံး နာမညျကြျောမငျးသမီးဆယျယောကျ
မွနျမာမိနျးကလေးတိုငျး အားကရြတဲ့ အသားဖွူဖွူ၊ နုနုဖတျဖတျအရုပျမလေးပုံစံနဲ့ ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျခြောမောသူတှကွေား ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးတှဟော စိတျကူးအိပျမကျထဲက Idol တှပေါပဲ။ ဒီလောကျခြောမောလှပနတေဲ့ ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးတှရေဲ့ အလှဟာ သဘာဝအလှမြိုးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ပွုပွငျထားတဲ့အလှမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ဘယျလိုပဲ ဖွဈနပေါစေ လှရကျလှနျးတာတော့ ငွငျးမရပါဘူး။ ဒီလောကျအလှဆုံးတှစေုနတေဲ့ ကိုရီးယားမငျးသမီးတို့ကွား ပွုံးလိုကျတာနဲ့ ကွှကေသြှားလောကျမယျ့ ပွုံးအလှပိုငျရှငျ (၁၀) ယောကျလညျး ရှိပါသေးသတဲ့။ သူတို့ကတော့-
ဘယျမငျးသမီးတှေ ဘယျလောကျလှလှ ကငျထဟေီးရဲ့ အပွုံးတဈခကျြမှာ ကွှဆေငျးသှားကွတဲ့ယောကျြားထုကွီးကတော့ မနညျးမနောပါပဲ။ မကျြလုံးကပါ ကွညျစငျရှနျးလဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အပွုံးတဈခကျြကတော့ ပါးခြိုငျ့ကှေးကှေးလေးနဲ့ အလှဆုံးလို့ဆိုရမလောကျပါပဲ။ ဒီအပွုံးလေးကွောငျ့ပဲ ပြိုမတေို့အသညျးစှဲ မငျးသားခြော Rain တောငျ ရုနျးမထှကျနိုငျအောငျဖွဈခဲ့ရတာမလား?
အှနျစောလို့ လူသိမြားတဲ့ Song Hye Kyo ရဲ့ အပွုံးကတော့ လူတိုငျးရဲ့ ရငျထဲမှာ စှဲငွိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အသကျကွီးလာလလေေ ပိုနုပြိုလာရခွငျးအကွောငျးတှထေဲမှာ သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှလေညျး ပါနမေလားဆိုတာ သိခငျြစရာပါပဲ။
ဒီမငျးသမီးလေးကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ လအနညျးငယျက “W Two World” Series နဲ့အောငျမွငျခဲ့တဲ့သူဖွဈပွီး သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုအေးအေးလေးတှကေ ကိုရီးယားရဲ့ အပွုံးအလှဆုံးမငျးသမီးတဈယောကျ ဖွဈစခေဲ့တာပါ။ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးမကျြနှာလေးနဲ့ ဘာမှထူးထူးခွားခွားလိမျးခွယျထားခွငျးမရှိတာတောငျ သူမရဲ့အပွုံးတဈခကျြနဲ့တငျ သူမကို မခဈြဘဲ မနနေိုငျအောငျ စှဲလမျးစမေိတဲ့အထိ ခဈြစရာကောငျးသူပါ။
City Hunter ဇာတျကားနဲ့ တဈရှိနျထိုးနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဒီမငျးသမီးခြောလေးကလညျး ပွုံးလိုကျတာနဲ့ မကျြလုံးလေးတှပေိတျသှားတဲ့အထိ ခဈြစရာကောငျးသူမို့ ကိုရီးယားက အမြိုးသားတှေ ဝနျးရံခံထားရသူလေးပါ။
နှုတျခမျးဖူးဖူး ခဈြစဖှယျအမူအရာလေးနဲ့ ကိုကိုတှအေသညျးစှဲအောငျ ပွုစားနိုငျတဲ့ Suzy ရဲ့ အပွုံးအောကျမှာ ကွှကေသြှားတဲ့ နာမညျကြျောမငျးသားကွီးတှလေညျး ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
ကိုရီးယားရဲ့ တကယျ့ နာမညျကွီး ဒိတျဒိတျကွဲ ကွျောငွာမျောဒယျလျလညျးဖွဈ၊ မငျးသမီးလညျးဖွဈတဲ့ Jun Ji Hyun ကတော့ အိမျထောငျသားမှေးပွုပွီးလို့ ကလေးတှရေတဲ့အထိ အပွဈကငျးစငျဖှယျအပွုံးလေးနဲ့ ပရိသတျတှအေသညျးကို စုပွုံပိုငျဆိုငျထားသူပါ။ သူမ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ “My Love from the Star” ရုပျသံစီးရီး ထဲမှာတော့ တကယျ့ကို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလေးတှေ အသှငျပွငျလေးတှနေဲ့ တှရေ့မှာပါ။ အမြိုးသားတို့သာမက အမြိုးသမီးထုပါခဈြခငျခွငျး ခံထားရတဲ့အထိပါပဲ။
ပါးခြိုငျ့ပါတဲ့လူတှရေဲ့ အပွုံးကမှ နှလုံးသားကို ညို့ယူဖမျးစားစတေယျဆိုတာ Shin Min Ah ကို ရညျညှနျးနသေလိုပါပဲ။ ပွုံးလိုကျတိုငျး ခြိုငျ့ဝငျသှားတဲ့ ပါးခြိုငျ့ခှကျခှကျလေး ၂ဖကျထဲမှာ ယောကျြားထုကွီးတဈရပျလုံး ခိုဝငျခငျြသှားမှာ အသအေခြာပါပဲ။
တညျငွိမျတဲ့အပွုံးလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေငျထဲ ဝငျရောကျလာခဲ့တဲ့ထဲမှာ သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှလေညျး အပါအဝငျပါပဲ။ Park Shin Hye ဟာလညျး သူမရဲ့ အပွုံးကိုမွငျမိတဲ့လူတိုငျး လိုကျပွုံးခငျြလာမိတဲ့အထိအောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိသူပါပဲ။
မအူမလညျ ခပျတညျတညျလေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနတေတျတဲ့ IU ကတော့ ပွုံးလိုကျတိုငျး ရငျထဲ အေးသှားတဲ့ထိအောငျ လှတဲ့ပွုံးအလှပိုငျရှငျပါ။ သူမရဲ့ နုနုနယျနယျ ခဈြစရာသှငျပွငျလေးနဲ့ အပွုံးဟာလညျး ကိုရီးယားမှာ ရပေနျးစားလကျြရှိနပေါတယျ။
ပွုံးအလှပိုငျရှငျတှထေဲ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလေးနဲ့ ပါဝငျလာတဲ့သူတှထေဲမှာ “Strong Woman Do Bong Soon” ဇာတျလမျးတှဲရဲ့ မငျးသမီးလေး Park Bo Young လညျး အပါအဝငျပါ။ ရယျလိုကျတာနဲ့ ကလေးလေးလို အပွဈကငျးတဲ့အပွုံးပိုငျရှငျလေးပါပဲ။
တကယျ့ကို အခြောအလှဆုံးတှမေို့ ဒီမငျးသမီးလေးတှထေဲက ဘယျမငျးသမီးလေးကို ကိုယျကွှမေိလဲဆိုတာ ဖွသှေားပေးဦးနျော။